Ukuziphekela ..Iflethi encinci ..
Umncinci oziphekela ngokugqibeleleyo ucocekile, ukhululekile umakhulu flat 2 yeemayile kumbindi wedolophu yaseKillarney. Ilungele isibini okanye isibini esinabantwana abancinci. Ilungele kuphela abo banemoto njengoko ikude kakhulu ukuya edolophini.
Ibandakanya ikhitshi / indawo yokutyela. Igumbi lokulala eli-1 elincinci elinebhedi ephindwe kabini kunye negumbi lebhokisi elinye elineebhedi ezinkulu. Igumbi lokuhlambela elincinci elineshawari akukho bhafu. imitha yombane eyamkela i-€2 zemali. Ngokuqhelekileyo ingqekembe enye ngosuku yanele iindleko zombane eziqhelekileyo.
Indawo incinci kodwa isebenza kakuhle njengesiseko apho ukhenketha eKerry / Killarney.
4.88 ·Izimvo eziyi-97
4.88 · Izimvo eziyi-97
Indawo yasemaphandleni, ubukhulu becala yezolimo kunye nokulima ngobisi ikakhulu ..ime iimayile ezimbini ukusuka kwidolophu yaseKillarney. Isiseko esifanelekileyo sokutyelela iKillarney kunye nokutyelela uKerry.